Home Wararka Guddiga doorashada Hirshabeeelle oo shaaciyay jadwalka doorashada laba kursi oo ka mid...
Guddiga doorashada Hirshabeeelle oo shaaciyay jadwalka doorashada laba kursi oo ka mid ah Golaha Shacabka
Guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa jadwal cusub kasoo saaray doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka Baarlamaanka Fedaraalka Soomaaliya, kuwaas oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Jowhar.
Labada kursi ee jadwalka cusub ee waqti doorashadoodu dhaceyso ay shaaciyeen guddiga ayaa kala ah HOP 106, HOP024, waxaana labadaan kursi doorashadoodu iney dhacdo ay aheyd sidii horay ay u shaaciyeen guddiga Sabtigii ina soo dhaafay, hayeeshee waxaa la sheegay iney dib ugu dhaceen isqabqabsi ka dhex jiray beelaha iska leh labadasi kursi.
Jadwalka cusub ee guddiga doorashada Hirshabeelle ay shaaciyeen ayay ku sheegeen in diiwaan Musharaxiinta ay bilaabaneyso Maanta oo taariiqdu tahay 13-bisha April, islamarkaana doorashada ay dhaceyso berito oo Khamiis ah taariiqduna tahay 14-April-2022.
Hirshabeelle iyo Jubbaland ayaa ah labada maamul goboleed ee wali aanan dhameystirin doorashada kuraasta Golaha Shacabka, waxaana berito oo Khamiis ah lagu wada in la dhaariyo Xildhibaanadda cusub ee dhawaan lagu soo doortay deegaanada dowlad goboleedyada dalka, sida guddiga doorashada heer Fedaraal ay shaaciyeen.
Previous articleWeerar lagu qaaday guri uu degan yahay masuul ka tirsan DG Jubbaland
Next articleMaxa ka soo baxay kulankii Madaxda DG Jubbaland & James Swan ee kuraasta Gedo?
Madaxweyne Xaaf oo war kasoo saaray Doorashada Galmudug
Qoor-qoor oo fariin hanjabaad ah u diray Shaqaalaha Maamulka Galmudug